Gaarriyana ma Naga Tagey!Lix haloo u wada gaar ahaa goconayaa mooyi!
W.Q. Maxamed Daahir Afrax Oct. 07, 2012
Abwaan Maxamed Xaashi Dhamac "Gaarriye" Siduu Good ku yiri gabay
Gaarriyana ma naga tagey! Laba sano oo keliya ayaa ka soo wareegtay markii aan akhristayaasha WardheerNews la wadaagay murugadii ay igu dhalisay geerida is daba-joogga ah ee sidii tusbax g’ay ay godka ku sii hoobanayaan hormuudkii hal-abuurka iyo abwaannada Soomaaliyeed. Kii aan xilligaas tacsidiisa u fadhiney wuxuu ahaa Saalax Xaashi Carab. Baroor-diiqdiisa waxaan ku xusay magacyada taxane dheer oo aan wax badan ka horreyn. Waxaa ka mid ahaa (Allaha u wada naxariistee) Xuseen Aw Faarax, Xasan Shiikh Muumin, Cabdulqaadir Xirsi Yamyam, Cabdillaahi Qarshe, Cabdi Muxumud Amiin, Maxamuud Tukaale, Cumar Dhuule, Cabdulle Raage iyo qaar kaloo badan. Labadii sano ee ka dambeyseyna waxaa ka sii daba tagey tiro aan ka yarayn intii aan maalintaas u murugoonayney. Qiyaastayda wuu yaryahay toddobaad aan mid hor leh laga qayla-keenin. Toddobaadkii dhawaa annagoo weli u fadhina tacsidii Faysal Cumar Mushteeg iyo Cabdi Jeylaani Marshaale oo in yar ka horreeyey ayaa nalooka naxsaday “Gaarriyana socoy”!
Wuxuu ahaa bulshay gole-joog macaan oo marka uu sheekaynayo asaga uun afkiisa la wada eego.
Tilmaan-bixintani ma aha iska male-awaal iyo nin-jeclaysi saaxiibtinimo. Waxay ka soo maaxatay xog-ogaalnimo hoose iyo aqoon dheer oo aan u lahaa Maxamed Xaashi Dhamac. Gaarriye muddo dhawr iyo soddon sannadood dhan ayaan ahayn saaxiib marba dal ku kulma (Soomaaliya, Itoobiya, Yemen, UK, Norway, kwd). Toddobaataneeyadii qarnigii hore ayaan isku barannay magaalada Muqdishu. Waxaa iskaaya baray hawlaha suugaanta oo labadayada midba dhinac kaga jirey, marna aan isku dhinac ka miisi jirney maadaama aan ahayn aragti-wadaag. In badan oo ka mid ah maansooyinkiisa caanka ah wuxuu sameeyey annagoo wada fadhina, waxaan ka mid ahaa dadkii u horreeyey ee uu u akhriyey intaan la faafin, talona ka weydiiyey. Waxaad ku garan kartaan qaar aan ka mid ahaa raggii uu magacooda ku halqabsan jirey. Tusaale: “Afraxowse weligay yididiilo kama webin”. Halkaasaad ka garan kartaan sababta keentay xanuunka gaar ahaaneed ee ay igu damaqday geerida Gaarriye. Sannadkii 1996kii, markii aan ku hawllanaa asaasidda Naadiga PEN ee Qalinleyda iyo Hal-abuurka Soomaaliyeed, Gaarriye wuxuu ka mid ahaa abwaannadii ugu horreeyey ee igu dhiirrigaliyey, gacantana igu siiyey. Anigoo jooga Nairobi oo saxiixyo baafinaya ayaan maqlay inuu socdaal ku joogo Jabuuti. Halkaas ayaan ugu tagey. Laba fadhi oo dhaadheer oo aan Jabuuti ku wada qaadannay 14kii iyo 15kii May 1996 ayuu igula aqbalay fikraddii asaaska PEN, ka dib markuu ku qancay, saxiixayna Axdiga International PEN oo aan u dhiibay. Kaas oo loo baahnaa in ay saxiixaan 25 qoraa oo bud-dhige u noqda asaaska Naadiga. Illaa waqtigaas Gaarriye wuxuu ka mid ahaa madaxda naadiga, asagoo imminka ahaa Guddoomiyaha Laanta Somaliland.
Gaarriye naxariistii janno Eebbe ha ku abaal-mariyo, ummadda uu ka geeriyoodeyna cawil khayr qaba ha ugu beddelo. Maxamed Daahir Afrax E-Mail: mdafrax@gmail.com
* Gaarriye Wq. Ibaraahin Yuusuf Axmed "Hawd" ____________________________________________________________________ We welcome the submission of all articles for possible publication on WardheerNews.com WardheerNews will only consider articles sent exclusively.